Ma omume-ekwe ka ị wepụ na ịhụchalụ iTunes ndabere data nke ngwaọrụ gị na selectively naghachi olu gị memos. Ọzọkwa, ma nsụgharị nke Wondershare Dr.Fone maka iOS-enye gị ohere kpọmkwem ike iṅomi na-agbake olu memos si iPhone 4 / 3GS, iPod aka 4 na iPad 1 enweghị ndabere faịlụ. N'ihi na iPhone 5 na iPhone 4S ọrụ, i nwere ike iji software kpọmkwem ike iṅomi na-agbake faịlụ ederede dị ka ozi kọntaktsị, ndetu, kalenda na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị Ị na-izute otu nsogbu? Na-agụ na maka ngwọta.
Wondershare IPhone Voice Memo Iweghachite
Naghachi ehichapụ olu memos si iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Naghachi ehichapụ olu memos site kpọmkwem ịgụ isiokwu iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Weghachite olu memos site iTunes ndabere maka iPhone
Ọ bụghị naanị na iPhone, na-akwado niile iPads na iPod aka 5/4
niile iPad nsụgharị gụnyere iPad Air, iPad Obere na Retina ngosi, iPad Obere, iPad na Retina ngosi, The ọhụrụ iPad, iPad 2, iPad 1
Naghachi iPhone Voice Memos na 2 Ụzọ
Nzọụkwụ 1. iṅomi gị iPhone ma ọ bụ wepụ iTunes ndabere faịlụ
Ẹkedori usoro ihe omume andc jikọọ gị iPhone (iOS 9 akwado) na kọmputa, ị ga-ahụ bụ isi window dị ka ndị a. Ị pụrụ nanị pịa na Malite iṅomi button na-esi gị iPhone scanned.
Ma ọ bụ, ị nwere ike họrọ naghachi n'aka iTunes ndabere File, ndị ọzọ mgbake mode nyere site Wondershare Dr.Fone maka iOS. Mgbe ahụ gị niile iTunes ndabere faịlụ ga-akpaghị aka scanned na egosipụta dị ka ndị a. Họrọ onye maka ngwaọrụ gị, wee pịa Malite iṅomi wepụ ọdịnaya.
Nzọụkwụ 2. Tulee na-agbake ehichapụ olu memos
A sekọnd ole na ole mgbe e mesịrị, ndị niile ọdịnaya gị ndabere faịlụ a ga-amịpụtara ma e depụtara ke edemede. Họrọ Voice Memos na ego ndị M4A faịlụ. Mark olu memos ị chọrọ iji naghachi na iti on "Naghachi" zọpụta ha niile na kọmputa gị.
Ọzọkwa, ị pụrụ naghachi ndị ọzọ na ọdịnaya dị ka photos, videos, kọntaktị, ozi, wdg si gị ndabere faịlụ, ma ọ bụrụ na e nwere ihe a mkpa.
Ọ bụrụ na ị a Windows onye ọrụ, na-eji Wondershare Dr.Fone maka iOS na ịrụ yiri iji weghachite olu gị memos, ma ọ bụ i nwere ike iji ihe omume kpọmkwem iṅomi gị iPhone 4 / 3GS, iPod aka 4 ma ọ bụ iPad 1 naghachi olu memos enweghị iTunes ndabere.
> Resource> Naghachi iPhone Data> Olee naghachi Voice Memos si iPhone / iPad / iPod aka